Little Bean from Omyanmar
Whatever Feel to Buy Enjoy !
All categories Electronics - - Fan - - Washing Machine - - Vaccum Cleaner - - Iron - - Airfryer - - Juicer - - Coffee Maker - - Air Cleaner - - Infracare - - Shaver - - Trimmer - - Hair Dryer - - Hair Straightner Curler - - Hair Styler - - Others - - Epilator - - Air Con - - Water Heater - - Air Cooler - - Thermopot - - Kettel - - Cooker - - Toaster - - Mixer - - Oven - - Cleaner - - Food Processor - - Food Streamer - - Soy Milk Maker - - Espresso Machine - - Hair Clipper - - Grooming Set - - Camera - - TV - - DVD Player - - Speaker - - Air Con - - Refrigerator - - Electronic Home Shower - - Air Purifier - - Water Purifier - - Blender - - Microwave - - Water Dispenser Computers - - Desktops - - Computer Accessories - - - - UPS - - - - Casings - - - - Power Supply - - - - Case Cooling - - - - CPU Cooling - - - - Motherboard - - - - Memory Stick - - - - Graphic Card - - - - External Drive - - - - Apple Solution Products - - - - Mouse - - - - Keyboard - - - - Speaker - - - - Others - - - - Microphones - - - - Webcam - - - - Gaming Chair - - - - Video Conferencing - - Monitors - - Laptops - - Notebooks - - Projectors - - Printer & Copier - - Headsets - - Gaming Product - - Softwares Smart Phones - - Smart Phone Accessories - - - - Car Charger - - - - Charging Cable - - - - Smart Charger - - - - Power Bank - - - - Earphone - - - - - - Single-ear Bluetooth Earphone - - - - - - Headset - - - - - - Lightning Earphone - - - - - - Sporting Bluetooth Earphone - - - - - - Wired earphone - - - - - - Buletooth Earphone - - - - - - Wireless Earphone - - - - - - Earphone with Mic - - - - Speaker - - - - Mobile Holder - - - - Selfie Stick - - - - USB Flash Disk - - - - Others - - - - Cable & Hub - - - - Screen Protector - - - - Speaker & Microphone - - - - Watch Accessories - - Mobilo - - LG - - HTC - - Huawei - - Samsung - - Sony - - OPPO - - VIVO - - Lenovo - - Gionee - - Singtech - - Nokia Household wear - - Mattress - - Settee - - Wardrobe - - Table - - Chair - - Chest - - Cabinet - - Locker - - Others - - Desk and Drawer Tablet - - Mobilo - - Window Tablet - - Singtech B​aby Products - - Baby Accessories - - Baby Bottels - - Diaper Wipes & Refills - - Toys and Games - - Baby Safety Products - - Baby Bottle Accessories - - Baby Feeding Accessories - - Baby Feeding Kitchen Ware - - Kitchen - - - - Pan - - - - Bar - - - - Ladle - - - - Skillet - - - - Pot - - - - Knife - - - - Other - - Grill - - Blender - - Meat - - Sandwich Maker - - Induction Cooker - - Other - - Gas Table Promotion Items - - Acer - - HP - - MSI - - Kiosk Furniture - - EUPA - - Smart Home - - Phlips - - My Bird's Nest - - Vacuum Cleaner - - DeLonghi - - POWER PAC - - HITACHI Smart Home POS Machine - - Thermal Printer - - Barcode Printer - - Barcode Scanner - - Paper Roll - - Other - - All in one POS Bird's Nest
Ks0Total
Computers & Gaming Products
Apple Solution Products
AUDIO AND STREAMING
Electronics & Living
Hair Straightner Curler
HOUSE HOLD WEAR
Desk and Drawer
Single-ear Bluetooth Earphone
Sporting Bluetooth Earphone
New Products Hot
Special Promotions Discounts
My Bird's Nest
> Little Bean
List of products by manufacturer Little Bean
Deluxe Mini Safety fan w/o LED (Blue/Green)
Deluxe Mini Safety fan w/o LED (red/Beige)
Deluxe Mini Safety Fan w/o LED (Turquoise/Pink)
Deluxe Mini Safety Fan w/o LED (Yellow/Orange)
lb 300ml PP drinking cup with handle (blue & Yellow)
LB 400ml PP drinking cup with Belt (Pink & Green)
LB Wonder Sippy 180ml/6oz Cup without Belts(Blue & Green)
LB Wonder Sippy 360ml /12oz drinking cup with belt (Blue...
Little Bean Anit-Mosquito Patch 12's
- ခြင်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးသည့် ကပ်ခွာ - သဘာဝ စပါးလင်အဆီ (citronella oil)ဖြင့်သာ ပြုလုပ်ထားခြင်း - DEET free ဖြစ်ခြင်း
Little Bean Anti-Mosquito Bracelet 2's
- ခြင်မကိုက်လက်ပတ် (၂)ခုပါရှိခြင်း - သဘာဝ စပါးလင်အဆီ (citronella oil) ဖြင့်သာပြုလုပ်ထားခြင်း - ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ လုံးဝမပါဝင်ခြင်း
Little Bean Baby Nail Clipper
- ကလေးငယ်များ လက်သည်းညှပ်ရန် သင့်တော်အောင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်း - မွေးကင်းစမှစ၍ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Little Bean Compact Sterilizer+Warmer
- နို့ဗူးပေါင်းစက် (သို့မဟုတ်) နို့ဗူးနွှေးစက်အဖြစ် နှစ်မျိုးအသုံးပြုနိုင်ခြင်း - လျှပ်စစ်တစ်နှစ်အာမခံပါရှိခြင်း - နို့ဗူး(၂)ဗူး အရွယ်အစားမရွေးကို ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပိုးသတ်ပေါင်းနိုင်ခြင်း
Little Bean Digital Thermometer
- ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ကိုယ်အပူချိန်ကို တိကျမှန်ကန်စွာ တိုင်းတာနိုင်ခြင်း - တိုင်းတာရန် အချိန်စက္ကန့်ပိုင်းသာကြာခြင်း - အသံပေးအချက်ပြစနစ်ပါရှိခြင်း
Little Bean Finger Tip Brush
- ကလေးငယ်၏ သွား၊ လျှာနှင့် ခံတွင်းသန့်ရှင်းပြုလုပ်နိုင်သော ဆီလီကွန်သွားပွတ်တံ - လက်ချောင်းထိပ်တွင်စွပ်၍ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Little Bean Food Cooker
- ကလေးအစားအစာများချက်ပြုတ်ရန် အထူးသင့်တော်သည့် ကြွေပေါင်းအိုး - လျှပ်စစ်တစ်နှစ်အာမခံပါရှိခြင်း - slow cookerကဲ့သို့ ဖြေးဖြေးချင်း နူးအောင်ချက်ပေးနိုင်ခြင်း
Little Bean Home & Car Bottle Warmer
- နေအိမ်နှင့် ကားပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် နို့ဗူးနှင့် ကလေးအစာနွှေးစက် - လျှပ်စစ်တစ်နှစ်အာမခံပါရှိခြင်း - မိမိအသုံးပြုလိုသော modeကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း
- နေအိမ်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် နို့ဗူးနှင့် ကလေးအစာနွှေးစက် - လျှပ်စစ်တစ်နှစ်အာမခံပါရှိခြင်း - နို့ဗူးအရွယ်အစားမရွေးသုံးနိုင်ခြင်း
Little Bean Mini Multipurpose Latch
- အံဆွဲ၊ ဘီဒို၊ ရေခဲသေတ္တာစသည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ကလေးအလွယ်တကူဖွင့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း
- ကလေးငယ်များအတွက် ဖြည့်စွက်အစားအစာများ ပြုလုပ်ရာတွင် အထူးအသုံးဝင်သည့်စက် - အစာပေါင်းစက် (steamer) နှင့် အစာကြိတ်စက် (blender) နှစ်မျိုးတွဲလျက်ပါရှိခြင်း
Little Bean Nasal Aspirator
- ကလေးနှာခေါင်းမှ နှပ်ရည်များကို လွယ်ကူစွာ စုပ်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း
Little Bean Sterilizer
- Little Bean နို့ဗူး (၃) ဗူးပါဝင်ခြင်း - လျှပ်စစ်တစ်နှစ်အာမခံပေးခြင်း
Little Bean Sterilizer + Warmer Combo
- နို့ဗူးပေါင်းစက်နှင့် နို့ဗူးနွှေးစက် (၂)မျိုး ပါဝင်ခြင်း - လျှပ်စစ်တစ်နှစ်အာမခံပေးခြင်း
- ခြင်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်သည့်လက်ပတ်/ခြေပတ် - သဘာဝစပါးလင်အဆီ (Citronella Oil) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း - ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ လုံးဝမပါဝင်ခြင်း - DEET Free ဖြစ်ခြင်း - US EPA အသိအမှတ်ပြုခြင်း - နာရီပေါင်း (၁၈၀) တိုင် အသုံးပြုခြင်း - ရေစိုခံနိုင်ခြင်း - ချိန်ညှိနိုင်ရန် အပေါက်ငယ်များစွာပါခြင်း - ပြန်သိမ်းဆည်း၍ လေလုံပလတ်စတစ်ဘူးငယ်ပါရှိခြင်း - ကလေးကုတင်၊...
- ခြင်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးသည့် ကပ်ခွာ - သဘာဝ စပါးလင်အဆီ(citronella oil )ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း - DEET Free ဖြစ်ခြင်း - ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ လုံးဝမပါဝင်ခြင်း - US EPA approved ရရှိခြင်း - (၁၂)နာရီတိုင်ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးခြင်း - နေရာမရွေးအသုံးပြုခြင်း - အပြားငယ် ၁၂ ခု ပါရှိခြင်း
မင်္ဂလာပါ အိုမြန်မာ ...
ပိုမိုထိရောက်ကောင်းမွန်အဆင့်မြင့်လိုက်သည့် အိုမြန်မာအွန်လိုင်းရှော့ပင်းမော [www.omyanmar.com] ကို တဖန်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
Get the Omyanmar Shopping Mall Application on
2016 Powered by iBiz Service Provider. All Rights Reserved